I-Rice flakes: sebenzisa ekuphekeni
Ukudla nokuphuza, Inkambo enkulu
I-Rice flakes ngumkhiqizo ovela kulo. Ngaphandle kwezinguquko futhi ezibuthakathaka. Ilayisi iyisitshalo sokusanhlamvu esithandwa kakhulu kuwo wonke umhlaba. Amazwe okusanhlamvu - i-India, i-Thailand ne-Indochina. Futhi ukutshala irayisi kwaqala okungenani eminyakeni engu-700 edlule. Ezikhathini zanamuhla, okusanhlamvu kusetshenziselwa futhi kufakwa. Umphumela uba yi-rice flakes. Futhi ngenxa yobuchwepheshe obuyingqayizivele, ukunambitheka kwemvelo nakho konke okuzuzisayo komkhiqizo onomsoco kugcinwa.
Ukwakhiwa kanye nekhalori okuqukethwe kwama-flakes
Omunye wemithombo yamaminerali namavithamini yi-flakes flakes. Zihlanganisa izakhi ezilandelayo nezakhi zokulandelela:
Amavithamini B (1,2,5,6), A, PP kanye no-E;
E-flakes i-rice ayikho gluten. I-allergen enamandla kakhulu. Ngakho-ke, ama-flakes angafakwa ekudleni kwezingane. Futhi unike abantwana njengokudla okuhambisanayo, kusukela ezinyangeni eziyisithupha. Ama-Flakes aphezulu kakhulu nge-caloric. Ngakho-ke, badinga kuphela ukusetshenziselwa imali encane. Amagremu ayi-100 aqukethe ama-khalori angu-360.
I-Rice flakes ibe yinye yemikhiqizo ewuthandayo nabathengi. Izinzuzo ezivela kubo aziqiniseki ezindaweni ezahlukene:
Ama-flakes amakhemikhalidididi anamanzi aqukethe amaprotheni kalula;
I-phosphorus ne-calcium inhle amazinyo nesistimu yethambo;
I-Zinc iyadingeka izinwele nezipikili;
Ukwakheka okucebile kwamaminerali namavithamini kusiza umzimba ukuba ululame ngokugcwele, uphinde uvuselele izimpahla zamanzi usuku lonke;
Ngenxa yefayibha yokudla, uhlelo lokugaya umzimba luyathuthukisa, futhi ubuthi kanye neminye imikhiqizo yokudiliza ikhishwa emzimbeni;
Ngokusetshenziswa kwama-flakes njalo, umsebenzi wesimiso sezinzwa ubuyiselwa, ukucindezeleka kanye nomoya omubi kushabalala;
Ngokusetshenziswa njalo komkhiqizo, ukucindezela kanye nomsebenzi wesimiso senhliziyo ijwayelekile, futhi i-arrhythmia iphela;
Amafulegi ayasiza kakhulu kubantu abanesifo sikashukela, ngoba i-fibre isiza ukulawula amazinga kashukela egazi;
Amakha evuthayo emlonyeni ayanyamalala;
Ama-Flakes alawula umsebenzi wezinso, futhi umzimba uveza uketshezi oludlulele.
Emkhakheni wobuhle ovela elayisi, ama-lotions namaski alungiswa, anomthelela wokudla okunomsoco futhi onomsoco ku-epidermis. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo omuhle ozosusa imibimbi encane.
I-Rice flakes ayikwazi ukufakwa ekudleni kwabantu abahlukunyezwayo nokuqothulwa. Futhi kulabo abanokungavumelani komunye nomkhiqizo. Kumele kukhunjulwe ukuthi okusanhlamvu kungabangela ukubola. Ngakho-ke, ama-flakes ayafakwa ekudleni kancane kancane, ezingxenyeni ezincane. Akufanelekile ukuhlukumeza umkhiqizo, ngoba lokhu kuvame ukuholela ekuqotheni.
Ukusetshenziswa kwamaflake ekuphekeni
Ama-rick flakes asetshenziswe isikhathi eside ekuphekeni. Ukupheka kuyahluka kakhulu. Okuvame kakhulu yi-porridge ebisi. Kodwa izondlo zokudla zeluleka ukuthi zingapheki, kepha ukuhambisa ama-flakes emanzini ashisayo abilayo imizuzu eyishumi. Okuphezulu kuhlanganiswe nesembozo. Le ndlela yokupheka isiza ukugcina zonke izakhiwo eziwusizo. Amafulegi angagcwala i-yogurt, ibhotela noma ubisi. Ukuze uthole ukunambitheka, wengeze izithelo zakho ozithandayo, amajikijolo, amantongomane noma ubisi oluncibilikisiwe.
Kusuka ku-rice flakes, ungalungisa i-pudding enhle futhi enempilo ye-dessert. Kuvela kahle kakhulu futhi kulula. I-Rice flakes iyinhle yokubhaka (ama-pie, amaqebelengwane, njll). Ukuhlanganisa ngokugcwele ne-tshokolethi ekuphekeni kwamaqebelengwane namaqebelengwane. Ijika elimnandi kakhulu irayisi casserole. Amafulegi angathathwa endaweni yokupheka ngefulawa noma asetshenziswe njenge-pan isinkwa lapho eheha inyama nenhlanzi.
Ushizi nge-fenugreek: incazelo, izakhiwo eziwusizo, inani lokudla okunomsoco, izinhlobo
Ngingaphi lapho ngithenga ukudla okudayi futhi ngingenzani na?
Indlela yokwenza uviniga we-currant kusuka ku-currant ebomvu noma emnyama
Indlela yokusika inqama ngokwemithetho
Kungani ukudla okusheshayo kuyingozi kakhulu emzimbeni wakho?
Ubani ababulalayo futhi bekhona ezweni lanamuhla?
Elizenzekelayo ngoba urinal: izinhlobo ukufakwa izici
Kungani inja idla utshani? Mayelana namakhambi kanye nokugaya izinja
Linux: search for amafayela kusetshenziswa esibulalayo
The best ebhishi zokungcebeleka Turkey
Indlela ewusizo amabhomu? izakhiwo ezisebenzisekayo oqabulayo emhlophe
Hibiscus ubhiya? Hibiscus: inzuzo kanye nokulimala emzimbeni
Isakhiwo yenqubo yokufunda njengoba isilinganiso womsebenzi lehlukene ekucabanga kwengcondvo netintfo zemfundo zesikole
Yikuphi igesi efulethini - semvelo noma uketshezi?
Leo Perfilov umlingisi: Biography, amabhayisikobho, empilweni yakho
Ihhotela Siagas Beach Ihhotela 3 * (Greece / yePeloponnese): isithombe, ukubuyekezwa